बिहीबार, मंसिर २८, २०७४ ००:००:०० | Comments
काठमाडौँ, २८ मंसिर । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले बिहीबारदेखि व्यवसाय थालेको छ। बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिबी चापागाईँले एक कार्यक्रमकाबीच इन्स्योरेन्सको कारोबार सेवा शुभारम्भ गरे।
प्रभु समूह, प्रभु बैंक, सांग्रिला विकास बैंक तथा अन्य व्यवसायिक समूहको लगानी रहेको प्रभु लाइफले बीमा बजारलाई ग्रामीण तहसम्म पुर्याउने जनाएको छ।
सो अवसरमा समितिका चापागाईँले दश वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रमा धेरै परिवर्तन आएको बताउँदै सम्भाब्य बजार धेरै भएकाले थप नयाँ बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिइएको उल्लेख गरे।
नयाँ बीमा कम्पनी संचालनमा आउँदा थप रोजगारी बढ्ने र बीमा बजारलाई पनि विस्तार गर्न सघाउ पुर्याउने उनको दावी छ।
प्रभु समूहका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले निर्वाचनपछि राजनीतिक संक्रमण सकिएको बताउँदै अर्थतन्त्रले समेत नयाँ उचाई लिने र बीमा बजार पनि गतिशील हुने बताए।
‘बजारमा केही नयाँ गर्न आएका हौँ, जीवन बीमा क्षेत्रमा हामीले छुट्टै स्थान बनाउनेछौँ उनले भने। कम्पनीका अध्यक्ष रामबहादुर पाण्डेले जीवन बीमालाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने उद्देश्यसहित कम्पनी स्थापना भएको बताए।
‘गाउँ गाउँसम्म जीवन बीमा विस्तार गर्नेछौँ, किसानदेखि साना व्यापार गर्नेसम्मलाई लक्षित गरेर बीमा पोलिसी ल्याउनेछौँ’ उनले भने।
परम्परागत बीमा बजारभन्दा माथि उठेर व्यवसाय गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
सांग्रिला डेभपलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष डा रविन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सांग्रिला बैंकले नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्ने मौका पाएको बताए।
दुई अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा संस्थापक शेयरधनीले १ अर्ब ४० करोड लगानी गरेका छन्। कम्पनीले केही समयभित्रै साठी करोड रुपैयाँ बराबरको साधरण शेयर जारी गर्ने जनाएको छ।
पछि थप्दै जानेगरी हाल कम्पनीले दुई पोलिसीहरु सार्वजनिक गरेको छ।
१. अमूल्य जीवन बीमा (आजीवन बीमा)– यो योजना अन्तर्गत बीमा समाप्ति मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ प्रदान गरिनेछ। बीमालेख परिपक्व भएपछि बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन र तत्पश्चात कुनै पनि समयमा बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई एक मुष्ठ बीमाङ्क रकम मात्र वा यदि बीमित १०० बर्ष सम्म जीवित रहेमा, १०० बर्ष पुगेको बर्षगाँठमा निजलाई एक मुष्ठ बीमाङ्क रकम पुनः भुक्तानी गरिनेछ।
बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ बीमालेख अन्तर्गत इच्छाइएको व्यक्तिलाई प्रदान गरिनेछ।
२. सम्बृद्ध जीवन बीमा (सावधिक बीमा)– यो योजना अन्तर्गत बीमा समाप्ति मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ प्रदान गरिनेछ। बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ बीमालेख अन्तर्गत इच्छाइएको व्यक्तिलाई प्रदान गरिनेछ।